DOWNLOAD de Havilland Kanada DHC-1 Chipmunk FS2004 - Rikoooo
Mpanoratra: Rick Piper, Dave Booker, Saverio Maurri
Izany no mety tsara fiaramanidina sy tsara tarehy! Tsy afaka milaza bebe kokoa, hanandrana azy! Misy amin'ny 13 repaints. Pilot dia saika tena, nijery azy mihetsiketsika! Faran'izay fiaramanidina. Faran'izay tontonana. Great feo. Noho ny mpanoratra noho ny asa tsara.
De Havilland Kanada DHC-1, fantatra koa amin'ny hoe Chipmunk (amin'ny teny Frantsay chipmunk) dia kely monoplane. Ary nanao ny sidina voalohany tamin'ny May 22 1946.
Chipmunk, dia roa-seater-maotera tokana fiaramanidina no fototra fanofanana fiaramanidina izay ny lehibe indrindra fiara ny Royal Air Force Canadian, Royal Air Force sy ny maro hafa amin'ny alalan'ny tafika rivotra be ny lahatsoratra-Ady Lehibe Faharoa. Ny Havilland Chipmunk no voalohany fiaramanidina marina tetikasa taorian'ny ady de Havilland Kanada.
Ankehitriny, ny 500 DHC-1 Chipmunk (fantatra koa amin'ny hoe "Chippie") foana airworthy.